‘साली कस्को भेनाको’मा मरिस्काको माया कसलाई ? « Ramailo छ
‘साली कस्को भेनाको’मा मरिस्काको माया कसलाई ?
फिल्म ‘साली कस्को भेना’को रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार प्रेसमिट गर्दै ‘माया तिमीलाई’ बोलको गीत रिलिज गरिएको हो । भिडियो हेर्नुस् :
नायिका मरिस्का पोखरेल र पुष्प आचार्य फिचरिङ गीतको भिडियोलाई गम्भिर विष्टले कोरियोग्राफी गरेका हुन् । सुरजसिंह ठकुरीको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा स्वर भने संगीतकार ठकुरी र आकांक्षा बस्यालको छ । प्रेसमिटमा फिल्ममा समावेश लोक लयको गीतको भिडियो पनि देखाइएको थियो ।
यसअघि ‘कान्छी’, ‘सन्तान’ र ‘कर्जा’ फिल्म बनाएका निर्माता राम प्रसाद श्रेष्ठले लामो समयपछि ‘साली कस्को भेना’को फिल्म बनाएका हुन् । जसमा विल्सन विक्रम राई, रजनी गुरुङ, मरिस्का पोखरेल, सुस्मा कार्की, रवि गिरी, बुद्धि तामाङ, जयनन्द लामा, कविता आले, विरेन श्रेष्ठ, पुष्प आचार्य र देव श्रेष्ठको अभिनय छ ।
भद्र भुजेल निर्देशित फिल्म ‘साली कस्को भेना’को मञ्चन भैसकेको नाटकमा आधारित रहेको प्रेसमिटमा खुलाइयो । प्रेसमिटमा कलाकारहरुले फिल्म राम्रो बनेको बताउँदै फिल्म हेर्न दर्शकलाई आग्रह गरे । फिल्म भने भदौ २९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।